Netatmo, izahay dia mizaha ny vahaolana vahaolana amin'ny fonenanao | Androidsis
Netatmo, izahay dia mizaha ny vahaolana omenao mba hipetrahanao ny tranonao
Alfonso ny voankazo | | IFA, About us
Taona maro lasa izay, ny fananana trano manan-tsaina no nofinofy izay tratry ny vitsy. Saingy miova ny toe-javatra noho ireo orinasa toa an'i Netatmo, izay mitondra antsika hanakaiky kokoa ny fahafaha-manana trano misy domotic amin'ny alàlan'ny finday Android.
Nanantona ny fijoroana Netatmo izahay mba hampiseho aminay ny karazana fitaovana rehetra hanodinana ny tranonao amin'ny alàlan'ny telefaona na takelakao. Ary mahita ny tsipika ny vokatra Netatmo, ny fananana mandeha ho azy ao an-trano dia tsy nofinofy intsony.
Ity no vahaolana Netatmo lehibe hibaiko ny tranonao
Ny vahaolana Netatmo isan-karazany dia hahafahantsika mifehy ny masontsivana isan-karazany ao an-tranontsika, toy ny mari-pana manodidina na haavo CO2, ankoatry ny fananana ny vinavinan'ny toetrandro noho ny gadget isan-karazany, toy ny refin'ny orana avy amin'ny mpamokatra.
Saingy ny teboka lehibe mahaliana dia miaraka amin'ny azy ireo fakan-tsary ahafahantsika manara-maso amin'ny alàlan'ny fitaovantsika Android hahita izay mitranga amin'ny fotoana rehetra. Misy modely aza, ny cfakantsary fanaraha-maso Netatmo Tongasoa, izany dia mahay mamantatra endrika ary hiarahaba ireo mpanofa trano, ankoatry ny fanomezana fampandrenesana rehefa tonga any an-trano ny olona iray. Matokia fa, araka ny hitanao tamin'ny horonan-tsary, dia azonay atao ny manamboatra ny fakan-tsary fandraisana mba tsy hanoratra izany rehefa miditra ny trano, ohatra.
Andian-tsarimihetsika mahaliana izay manana vidiny manodidina ny 100 - 199 euro. Raisina ny fahafaha-manolotra atolotry ny vahaolana samihafa an'ny Netatmo, Heveriko fa vidiny tena manintona izany raha te hanana trano maoderina indrindra ao amin'ny sakana iray ianao. Izao fotsiny isika dia mila miandry ny bandy ao amin'ny Netatmo handefa anay andrana fanandramana samihafa hahafahantsika mizaha toetra ireo fitaovana mahaliana izay hanamora ny fiainanao izany.
Ahoana ny hevitrao momba ny vahaolana Netatmo handaminana ny tranonao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » IFA » Netatmo, izahay dia mizaha ny vahaolana omenao mba hipetrahanao ny tranonao
Fermin Cano Ramirez dia hoy izy:
Juan Jose Casilla Salguero
Valiny tamin'i Fermín Cano Ramirez
Action Launcher dia navaozina ho 3.9 miaraka amin'ireo fiasa Nexus Launcher ary maro hafa
Lenovo Phab 2 Pro, ilay finday izay mamaritra ny toerana misy azy na aiza na aiza misy azy, dia ahemotra mandra-pahatongan'ny fararano